Namidy ny trano fandraisam-bahiny Trump International any Washington, DC
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Namidy ny trano fandraisam-bahiny Trump International any Washington, DC
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Namidy ny trano fandraisam-bahiny Trump International any Washington, DC.
Na dia teo aza ny filazan'i Trump fa nitondra vola manodidina ny 150 tapitrisa dolara nandritra ny fotoana nitondrany, ny antontan-taratasin'ny governemanta dia mampiseho ny fahaverezan'ny filoha teo aloha mihoatra ny 70 tapitrisa dolara.
Ny Trump International Hotel dia hita ao amin'ny tranobe manan-tantara efa taonjato maro ao afovoan-tanànan'i Washington.
An'ny governemanta amerikana ilay trano manan-tantara saingy azo hofaina hatramin'ny 100 taona.
Ny orinasa fampiasam-bola monina any Miami CGI Merchant Group dia mikasa ny hanaisotra ny anaran'i Trump ao amin'ilay trano ary hanamarika izany amin'ny marika Waldorf Astoria an'ny Hilton.
Ny orinasa fampiasam-bola any Miami CGI Merchant Group dia nividy ny zo amin'ny Trump International Hotel hita ao amin'ny tranobe manan-tantara efa taonjato maro ao afovoan-tanànan'i Washington, DC
Trump International Hotel dia misy sakana vitsivitsy miala amin'ny Trano Fotsy ary mitana tranobe manan-tantara izay an'ny governemanta amerikana saingy azo hofaina hatramin'ny 100 taona.
Ny hotely izay lasa malaza amin'ny Trump Nilaza ireo mpanohana fa mitondra fatiantoka bebe kokoa noho ny tombony tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Na dia eo aza TrumpNy fitakian'ny sandoka fa ny trano fandraisam-bahiny dia nitondra manodidina ny 150 tapitrisa dolara tamin'ny fotoana nitondrany, ny antontan-taratasin'ny governemanta dia mampiseho ny fahaverezan'ny filoha teo aloha mihoatra ny $ 70 tapitrisa.
Hitan'ny komity mpanara-maso an'ny Kongresy ihany koa fa nahazo vola manodidina ny 3.7 tapitrisa dolara avy amin'ny governemanta vahiny ilay trano fandraisam-bahiny, izay azo heverina ho mety ho fifandonana mahaliana.
Na izany aza, ny zon'ny trano fandraisam-bahiny dia hitondra $ 375 tapitrisa ho an'ny orinasan'ny filoha teo aloha Donald Trump.
Ny mpividy dia orinasa fampiasam-bola monina any Miami CGI Merchant Group, izay mikasa ny hanaisotra ny anaran'i Trump ao amin'ilay trano ary hitantana sy homarihin'ny vondrona Waldorf Astoria an'i Hilton.